Singapore , ny "Lamekin'ny" fizahan-tany maoderina, manintona mpizaha tany maro isan-karazany manerana izao tontolo izao isan-taona. Izy io dia mikasika ny fomban-drazana mahazatra amin'ny fomban-tany atsinanana miaraka amin'ny fampionona Eoropeana. Noho izany, ao amin'io tanàna io dia tsy afaka ny hanana fotoana tsara fotsiny ianao eo amoron-dranomasina, hilomano ao anaty rano mivaingana. Misy toerana maro eto, tena mendrika ny sainao. Koa, holazainay aminao ny zavatra tokony hijerena any Singapore.
Merlion any Singapore
Ao afovoan-tanàna ny Merlayon, tandindon'ny Singapore. Ity tsangambato-loharano ity dia zavaboary mahagaga izay manana liona sy trondro misy trondro. Ny tsangambato dia manasongadina ny tantara fohy ao Singapore, izay avy amin'ny tanàna kely iray no nivadika ho tanàna matanjaka be. Etsy ankilany, ny anarana hoe "Singapore" dia adika hoe "tanànan'ny liona".
Ny Wheel Ferris any Singapore
Iray amin'ireo sangan'asa malaza indrindra ao an-tanàna ny safidy atao hoe Singapore Flyer - kodiarana goavam-be. Tao anatin'ny haavony (165 m), dia nahatratra ny toetrany malaza tany Londres, London Eye, tamin'ny 30 m. Ny kodiarana, izay miorina eo afovoan'ny faritra misy an'i Marina Bay, dia manana cabins 28, manolotra fahitana mahatalanjona ny fahitana an'i Singapore, sy ireo nosy Malezia ary Indonezia. Ny halavan'ny dia tsy mahazatra dia 30 minitra.
Universal Park any Singapore
Ny zaridaina fialamboly any Singapore avy amin'ny Universal Studios dia hita ao amin'ny nosin'i Sentosa. Fialan-tsasatra ity, miorina amin'ny faritra 20 hektara, manolotra atleta 24. Ny faritra iray manontolo ao amin'ny Universal Park dia mizara ho fizarana fito, izay ahafahan'ny mpitsidika "mitsidika" ny Hollywood Boulevard, jereo ny Walk of Fame, mandany fivarotana mahafinaritra any amin'ny faritra fandraisam-bahiny, jereo ny fampisehoana Steven Spielberg, mahatsapa ny fahatsapana tsy mbola nisy teo amin'ny fiara fitaterana sy ny maro hafa.
Oceanarium ao Singapore
Ny tena mahasarika an'i Singapore dia ny fiainana an-dranomasina Marine Life Park, izay lehibe indrindra eran'izao tontolo izao. Ao anatin'izany no ahitanao mponina marin-drano maherin'ny 100 000. Etsy an-danin'izany dia inoana fa ny biby an-dranomasina dia ao anatin'ny toe-javatra toy ny voajanahary araka izay tratra. Etsy ankilany, ankoatra ireo fitsangatsanganana an-tserasera eto dia azonao atao ny manararaotra ny Adventure Cove Waterpark, toerana fialantsasatra eny ambony rano. Misy hômômagnets, sehatry ny rano enina, renirano mahavariana ary lakandranon'ny rano manga. Samy misy ireo zavatra ireo - ny ranomasina sy ny zaridaina ao Sentoz, Singapore.
Loharanon'ny Harena any Singapore
Ao afovoan'i Singapore, eo akaikin'ny foiben'ny fivarotana Suntec City dia mitsangana ny loharano lehibe indrindra manerantany - ny Loharanon'ny Harena. Niorina araka ny fitsipiky ny Feng Shui, ny rafitra dia peratra varahina, nipoitra ambonin'ny tany noho ny tongony efatra tongotra. Ny loharano dia mampiray saina, firaisan-kina ara-panahy ary maneho ny harena. Ny hariva, ny loharano dia mahafinaritra amin'ny fampisehoana laser sy mozika am-pifaliana.
Bird Park any Singapore
Any amin'ny ilany andrefan'ny havoana Djurong no misy ny vorona lehibe indrindra any Azia. Ahitana karazam-borona enin-jato eo ho eo, ary ny karazan'ny mpiasan'ny valan-javaboary dia samy namorona ny fonenany avy.
Fonenan'ny foko any Singapore
Ho fanamafisana, napetraka ao Singapore ny foko foko mba hifindra monina. Ka, ohatra, ao Chaitown ianao dia toa any amin'ny faritra atsinanan'i Sina. Azonao atao ny mividy tsaratsara tsy mendrika sy fanafody tsy misy nentim-paharazana, jereo ny tempolin'i India fahiny - Sri Mariamman. Ny faritr'i Little India dia mitoraka ny lokony sy ny hatsarany. Ireo mpizaha tany dia ho liana amin'ny fiangonana Vera Kaliaman sy Srinivasa Perumal, mpivarotra bazaary sy firavaka indiana. Mendrika ny mandehandeha eny amin'ny arabe Arabo hividy sehatra, firavaka ary headgear amin'ny vidiny tsara indrindra ary manandrana ny mahandro Arabo mahazatra.
Ny endrik'i Welsh corgi Pembroke
Takelaka hazo ho an'ny latabatra
Tabilao ho an'ny trano fisakafoanana
Radonitsa - inona no tokony ataoko amin'izao andro izao, ary inona no tokony handà ahy?
Biby ho an'ny fanilikilihana
Afaka manjaitra ho an'ny vehivavy bevohoka ve aho?
Herinandro 30 isaky ny fitondrana vohoka - inona no mitranga?
Ny antontan'isa momba ny fisintahana any Rosia
Lizobakt - torolàlana ampiasaina amin'ny fitondrana vohoka
Toerana fanasan-damba ho an'ny volo
Plasmolifting amin'ny volo - ny zavatra rehetra ilainao hahafantarana momba ny dingana
Fihetseham-po amin'ny sela